Waa Immisa Lacagta Ay Heli Doonto Kooxda Guuleysata Iyo Kooxda Laga Guuleysto Finalka Champions League Ee Liverpool vs Tottenham? - Gool24.Net
May 31, 2019 Apdihakem Omer Adem
Liverpool iyo Tottenham ayaa isku wajahaya finalka Champions League 1da bisha Juun, iyadoo magaalada Madrid ay martigelineyso kulanka ugu xiisaha badan sannadka.
Tan iyo markii magaca laga bedelay European Cup, UEFA ayaa tartanka ka dhigtay tartan si weyn looga daawado dunida iyadoo kulanka finalka ee kooxaha Premier League ay daawan doonaan in ka badan 350 milyan ruux oo ku kala nool in ka badan 200 wadan.
Iyadoo ciyaartoyda ay u tartami doonaan inay kor u qaadaan koobka ugu xiisah badan badan kooxaha Yurub hadana madaxda labada kooxood ayaa sii xisaabsan doonta lacagta ay helayaan haddii kooxdooda ay kor u qaado koobka taasoo wax ka tari doonta lacagta ay la gelayaan suuqa kala iibsiga.
UEFA ayaa xaqiijiay lacagta ay qaadaneyso kooxda hanata koobka Champions League waana 19 milyan euro halka kooxda laga qaado ay heli doonto 15 milyan euro.
Laakiin labada kooxood lacago badan ayay soo uruusadeen tan iyo wareegii group-yada. Kaliya inay u soo baxeen wareega group-yada waxa ay kooxdiiba ku heshay 15.25 milyan euro. Wareeg kasta oo ay ka soo gudbeen waxa ay wadar ahaan ku heleen 32 milyan euo.
Waxaa intaas sii dheer in dhibic kasta oo ay heleen wareega group-yada in lagu siiyay 900 kun euro taasoo la micno ah in Liverpool ay heshay 8.1 milyan euro halka Tottenham ay heshay 7.2 milyan euro.
Haddii kooxda Jurgen Klopp ay finalka ku guuleysato waxa ay wadar ahaan heli doonaa 74.35 milyan euro, waana in ka badan inta ay Tottenham heli doonto haddii ay koobka qaado kuwaasoo heli doona 73.45 milayn euro.
Waxaa intaas dheer kooxihii u soo baxay UEFA Super Cup sannadkii hore ee Real Madrid iyo Atletico Madrid waxay mid walba heshay 3.5 milayn euro halka kooxda hanatay ay u sii dheereyd hal milyan euro.